घरेलु रकेटहरू - Ikkaro
हामी नयाँ सेक्सको बारेमा कुरा गर्न एक सेक्सन खोल्छौं, त्यो घरको बनाइएको रकेटको।
इन्टरनेट सर्फिंग म धेरै प्रकारका भेटिएँ घरेलु रकेटहरू, धेरै धेरै सरल र सरल; पानी र प्लास्टिकको बोतलहरू र अन्य अधिक परिष्कृतहरूसँग मिल्दो रकेटहरू, जहाँ अधिक प्रविधि आवश्यक छ।
हामीसँग धेरै धेरै सरल, रचनात्मक विकल्पहरू छन् जुन हामी बच्चाहरूलाई सिकाउन प्रयोग गर्दछौं। के तपाईं बच्चाहरूको लागि घरेलु रकेट चाहानुहुन्छ? र के पनि बन्द हुन्छ? र तिनीहरूले के गर्न सक्छन् (तपाइँको पाठ्यक्रमको पर्यवेक्षणको साथ? खैर, सेक्सनमा लिंकहरू नभुल्नुहोस्।
तपाई अझ गम्भीर कुरा खोज्दै हुनुहुन्छ ... ठीक छ, हामीसँग पहिले नै पानी रकेटहरू छन्। के तपाईंलाई थाहा छ तिनीहरू 500०० मिटर उचाईमा पुग्न सक्छन्?
त्यहाँ DIY रकेटहरू छन् जुन एक औद्योगिक निर्माणमा ईर्ष्या गर्न केही छैन। हामी पत्ता लगाउन सक्छौं कि कसरी रकेट ईन्धन बनाउने। वास्तवमै चाखलाग्दो विषयहरू, यद्यपि उनीहरूको ख्याल राख्नु पर्दछ किनकि ती खतरनाक विषयहरू हुन सक्छन्।
मलाई हावामा चीजहरू फ्याँक्न मन पर्छ र मलाई चरण-देखि-चरण ट्यूटोरियल गर्न मन पर्छ।
रकेटहरू उच्च टेक्नोलोजीको अभिव्यक्ति हुन्। प्रोजेक्टहरू हेर्दै जुन मानिसहरूले मनपराउँछन्
मलाई लाग्छ यो एक राम्रो सेक्सन हो धेरै चीजहरूको अन्वेषण गर्न ...
घरेलु स्प्रे रकेट
एक सरल रकेटहरू र प्रभावकारी मैले देखेको छु र मैले केहि धेरै देखेको छु ;-) यसले केहि प्रकारको एरोसोल, डिओडोरन्ट वा त्यस्तै स्प्रे जलाएर काम गर्दछ, जति बढी ज्वलनशील हुन्छ।
मैले मेरो कार्य-सूचीमा राखेको छु। तर जब मैले यो गर्ने निर्णय गरें, म तपाईंलाई भिडियो सहित छोडिदिन्छु। धेरै धेरै सरल। र जति सक्दो चाँडो हामी हाम्रो गर्छौं, हामी यसलाई हामीले सुधारको साथ समात्दछौं ;-)
En डीलको युट्यूब च्यानल, हामी रक्सीले गरेको धेरै प्रयोगहरू फेला पार्न सक्छौं।
यो सरल रक्सी रकेट यसले मेरो ध्यान खिचेको छ। धेरै साधारण रोकेटको लाइनमा जस्तै म्याच रकेट वा चिया ब्यागको लागि एक जस्तै। तिनीहरू खेलहरू हुन् जुन हामी आफ्ना बच्चाहरूसँग खेल्न सक्छौं, सँधै तिनीहरूलाई आगो प्रयोग गर्ने र आवश्यक कदमहरू चाल्ने खतराहरूबारे बुझाउँदै। तिनीहरूसँग यो नगर्नुहोस् यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तिनीहरूले यो प्रयास गर्न जाँदैछन् जब तिनीहरू एक्लै वा तिनीहरूका साथीहरूसँग छन्। तपाइँ आफ्ना बच्चाहरूलाई अरू कसैलाई भन्दा राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ। गतिविधिको फाइदा भनेको त्यो जिज्ञासा पैदा गर्नु हो, त्यो मोह, जसले उनीहरूलाई सिक्ने र प्रयोग जारी राख्न चाहान्छ।
यस पटक हामीलाई केवल चाहिन्छ
जलेको मदिरा, उनीहरूले सुपरमार्केटमा बेच्ने कि निलो रंग्दछ
रक्सी बोतलमा हालिन्छ र हामी यसलाई खाली गर्दछौं। त्यसपछि हामीले यसलाई स्थितिमा राख्यौं र लाइटरलाई प्लगमा प्वालको प्वालको नजिक ल्याउँछौं। त्यसैले बाँकी रहेका, भित्ताहरूमा भित्रै रहेको सानो मदिराले बोतल प्रज्वलित गर्नेछ र धक्का दिन्छ।
म तपाइँलाई केहि भिडियो छोड्छु।
चिया ब्यागको साथ रकेट
हामी भन्न सक्छौं कि यो संसारमा सब भन्दा साधारण रकेट हो। तपाईंलाई चिया ब्यागको कागज मात्र चाहिन्छ ... पढ्न जारी राख्नुहोस्
खेलको साथ घरेलु रकेट
हामी खेल रोकेट हेर्न जाँदैछौं। यी सरल प्रपल्सन रकेटहरू यसका साथ बनेका छन् ... पढ्न जारी राख्नुहोस्